IPhone 11 agafeela n'aka AnTuTu | Gam akporosis
AnTuTu na-enyocha usoro iPhone 11 ọhụrụ ahụ na nyocha ya
Dedicatedbọchị ikpeazụ ndị a, n'ụzọ dị ukwuu, ararala nye ngwaahịa ọhụrụ Apple, nke, karịa ihe ọ bụla ọzọ, iPhone 11, usoro nke mejuputara atule ato ma abia imebi iwu ulo oru niile ... ma obu igbali, opekata mpe.
A maara ụlọ ọrụ Cupertino mgbe niile maka ịmalite ngwaahịa kpakpando. Ihe njedebe ha niile, site na smartphones ruo smartwatches, na-achọ ka ha bụrụ ndị kachasị mma n'ihe niile, nke ahụ bụ ihe ha rụzuru na nchekwa data AnTuTu, akara nyocha nke nwalere ha iji mee ka akara nke ọnụ ọgụgụ ndị a pụta ìhè na arụmọrụ ọ bụla. ngalaba.
Chipsetị maka akara ndị a sitere na iPhone 11, 11 Pro na 11 Pro Max bụ A13 Bionic, onye nhazi ohuru nke ụlọ ọrụ America nke nwere ikike nhazi dị iche iche dabere na ọgụgụ isi, nke nwere ike ịnya isi na nhazi ihe ruru 1 ijeri ọrụ kwa nkeji. Geekbench, na mmepe na nso nso a, edeputara ya dika SoC dị ike karịa Snapdragon 855 Plus, ndị Kirin 980 na Exynos 9825, chipsets atọ nke Qualcomm, Huawei na Samsung, n'otu n'otu.
The iPhone 11 bụ ihe ndị bụ isi ụdị nke ọhụrụ set nke atọ, ma ọlị a ekwentị na-enweghị ọtụtụ ihe na-enye; dị nnọọ iche. Nke a nwere ike ịdebanye aha obere akara nke 456,655 isi na nchekwa data AnTuTu, ebe iPhone 11 Pro na Pro Max nwere ike ịme ya na akara ngosi nke 455,452 na 465,098. Ọdịiche dị na ọnụ ọgụgụ dị n'etiti ụdị ndị a adịchaghị mkpa; Nke a bụ n'ihi na ha niile nwere hotara na mbụ processor, ọ bụ ezie na dị iche iche na nsụgharị nke RAM na ROM.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AnTuTu na-enyocha usoro iPhone 11 ọhụrụ ahụ na nyocha ya
Gionee F9 Plus, ekwentị ọhụrụ dị ala nke nwere ọnụ ahịa dị egwu
Leaked ụbọchị ngosi ọhụụ maka OnePlus 7T na 7T Pro